“Hazard wuxuu noqon karaa mid ka fiican Ronaldo iyo Messi laakiin waxay ku xiran tahay….”.-Maurizio Sarri - Wargane News
Home Sports “Hazard wuxuu noqon karaa mid ka fiican Ronaldo iyo Messi laakiin waxay...
Tababaraha Chelsea Maurizio Sarri ayaa sheegay in Eden Hazard uu noqon karo laacibka ugu fiican adduunka balse ay isaga ku xiran tahay midaa.
Laacibka reer Belgium ayaa 11 maalmood uun la shaqeynayay macallinkiisa cusub tan iyo sidii uu tababarka ugu soo laabtay.
“Hazard wuu is hagaajin karaa oo is hormarin karaa. Waxaan ka hadleynaa mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Yurub waqtigan, laakiin inbadan ayuu isa sii hormarin karaa. Wuxuu noqon karaa kan ugu fiican adduunka,” Sarri ayaa sidaa yiri ka hor kulanka Maanta ee Arsenal.
“Isaga ayay ku xiran tahay, tan ugu fiican xirfada farsamada, tan ugu fiican gool dhalinta, laakiin waxay ku xiran tahay kaliya maskaxdiisa.
“Hazard Farsamo ahaan waa mid ka mid ah kugu ugu fiican Yurub waqti xaadirkan.
“Waxay ku xiran tahay midaa booska uu ka ciyaarayo markuu garoonka ku jiro. Shantii sano ee ugu dambeysay, Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi waxay u ciyaarayen sida Weeraryahan. Hazard wuxuu mararka qaar u ciyaarayay sida mid garabka ka ciyaara.”.
The 2021 national budget to be 2.7% more than the previous one